Hadhwanagnews, Diridhaba, Waahen iyo Been Abuurka Wararka Maxa Laga Yeelaya..? | Somaliland.Org Blog
← Danyarta Dulman iyo Danteenu halkay ku jirto
War deg deg ah: Gudiga Qaban Qaabada Ee Xisbiga UDUB Ayaa Si Qarsoodi Leh Isugu Dayay in Qaab Farsamo Lagu Reebo Mushurarnimaxada Cabdillaahi Iimaan Xuseen →
Hadhwanagnews, Diridhaba, Waahen iyo Been Abuurka Wararka Maxa Laga Yeelaya..?
Posted on January 29, 2009 by unregistered	Waxa dhowrki cisho ee ugu danbeeyey kusoo baxayay shebekadda hadhwanagnews iyo waaheen maqaalo iyo warar been abuur ah oo la xidhiidha xisbiga KULMIYE oo shirweyne ku qabsaday qurbajoogiisu magaaladda London. Wararkaas ama warar ku-sheegaas waxa soo qorayay oo labadas web usoo tabinayay Maxamed Cabdi Xasan Diridhaba oo la sheegay inuu yahay wariyaha hadhwanaag ee London.
Haddaba in badan ayaa saxaafadda lagu arkay warar laga soo xigto masuuliyin o masuuliyangtisi tidhahdo warkaas sidaas uman odhan ee wax ayaa laga bedelay. Laakin wa ii kow war aan haba yaraate masulka ama xisbiga loo tirinayo kasoo bixin oo been abuur ah oo lasoo daabaco.
Tusale ahaan, kolay anigu odhan mayo wariye laakin waxan leeyahay yarkaas Diridhaba waxa uu Hadhwanaagnews soo geliyey wararkan hoose oo gebi ahaanba been abuur ah.
1-Cali Marshal oo ku dhowaaqay in xisbiga KULMIYE ka noqon doono heshiisyadi xukuumaddu la gashay Ethiopia iyo Jabuuti
2-Maxamed Yonis Cawale oo ah sarkaal ka tirsan KULMIYE oo sheegtay inu yahay mulkiilaha Radio Horyal
3-XIsbiga KULMIYE oo dhinac isaga riixay hadaladi Cali GUuled
Labada beenood ee hore waa ta koowad ee in Cali Marshal sheegay in KULMIYE masaxayo heshiisyadi lala galay Ethiopia iyo Jabuti. Anigu wax an goobjoog ka ahaa shirka, cajaladihi laga duubayna way yaalan, hadalkas la qorayna ma odhan Cali Marshal iyo cid kale oo shirka joogtay toona. Waa ta labaad ee ah Maxamed Yonis oo sheegtay inuu leeyahay Horyal. Cajabeey Cajiibay. Mar labad marna ma dhicin in Maxamed YOnis sheegtay inuu Horyal leyahay, oo de waanu lahaynba, cid kalena ma sheegan inay leedahay.
Hadaba yada oo labadaas beenood ee hore lala yaaban yahay ayaa yarkii Diridhaha iyo Hadhwanaagnews kasii dareen. Waxa dhacday xisbiga KULMIYE aya soo saaray war murtiyeed uu ku beeninayo warkii Hadhwanaag, waaheen iyo Diridhaba qoreen. Halkay warkii warkooda beeninayay soo qori lahaayen ayaa hadana war kale soo geliyen oo odhanaya
Xisbiga KULMIYE oo dhinac isaga rixay hadaladi Cali Marshal
Bal u fiirso markaad cinwaankas aragto waxad moodaysa in Cali Marshal wali hadaladi laga soo tebiyey sax ahaayen laakin KULMIYE leeyahay kuma racsani. Dabcan taasina waa been abuurid sadexaad oo hadhwanaagnews iyo Diridhaba ku kaceen oo halkay so qori lahaayen warkii la beeniyey ayay hadana si been iyo khalad ah uga faaideysten.
Intaas ka bacdi waxa aan rabaa inan iftimin yar ka bixiyo sababta keentay warkan beenta ah ee KULMIYE iyo Cali Maarshal laga been abuuray. Horta cida been abuurka sameeysay waa yarka Diridhaba. Runtii isaguna been abuurka ma samayn ee wa loo sameeyey. Taas waxad ka garataa websiteka waaheen oo uu leeyahay Dr Axmed Xuseen ayaa lagu soo qoray warkan isla saacadii lagu soo daabacay hadhwanaag. Laakin warkaas lagu qoray waaheen waa laga reebay magaca Diridhaba, halka lagu soo qoray warkaas webka hadhwanaagnews yadoo lagu soo qoray magaca Diridhaba. Ogoow oo internetka labadaas bog oo qudha, waa waaheen iyo hadhwanaag aya lagu soo qoray. Wayna ognahay oo waaheen waxa leh Dr Axmed Xuseen halka Hadhwanaagna uu sheegto inuu wariyenimo ugu shaqeeyo.
Hadaba waan ognahay oo waaheen cadho iyo dagaal KULMIYE ayaa haya ee waxaan rabaa inan ogaado. Shebekada hadhwanaagnews yaduna ma waxay ku biirtay oo ka mid tahay qarannews iyo waaheen iyo shebekadihii uu Cawil mushaharka siin jiray mise yarka Diridhaba ayaa si khaldan u isticmaalay hawshi iyo masuuliyadiisi. Waxa looga fadhiyaa hadhwanaagnews inay raali galin buuxda ka bixiso wararkas been abuurka ah ee Diridhaba soo galiyay, isagana talaabo ka qaado. Haddii ay taaas samayn waydo waa inay cadayn buuxda keenta oo Diridhaba cadaynaysa wararkas uu qoray. Haddii labadaas midna la waayo, way innoo danbayn taloo iyo tusaaleyn. Cabdisamad Cabdilaahi
This entry was posted in opinion. Bookmark the permalink.	← Danyarta Dulman iyo Danteenu halkay ku jirto